Hot Pot & BBQ ကိုအဝတီးဖို့ Wa Tote Kyee ရှိတယ်နော်??? – FoodiesNavi
Hot Pot & BBQ ကိုအဝတီးဖို့ Wa Tote Kyee ရှိတယ်နော်???
By yin sandi On January 18, 2018 0
? ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍? လူဦးရေထူထပ်များပြားလာမှုတွေကြောင့် ⛲️⛱?? အပန်းဖြေစရာနေရာတွေ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံစရာနေရာတွေ အရမ်းကိုရှားပါးလာပါတယ်။ ??? ဒါကြောင့် ?? သူငယ်ချင်းတွေစုဝေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ?‍?‍?‍?? မိသားစုတွေပျော်ပျော်ပါးပါးအပန်းဖြေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ?‍❤️‍?‍??‍❤️‍? ချစ်သူတွေဆုံတွေ့ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် စားသောက်ဆိုင်တွေကိုအားထားလာကြပါတယ်။ ??? အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကို တပျော်တပါးစားသောက်ရင်း တိုင်ပင်ပြောဆိုကြတာဟာ ရန်ကုန်ရဲ့အလေ့အထတစ်ခုလိုဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ ။ ??? ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Foodies Navi ကနေအရသာလည်းကောင်းပြီး ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ဆုံတွေ့လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ???
ဒီဆိုင်လေးကတော့ အခုလတ်တလော Foodies တို့အသဲစွဲနေတဲ့ ???????? Hot Pot & BBQ Buffet ရနိုင်တဲ့ Wa Tote Kyee ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ??? လူသိများပြီးသားဆိုင်လေးဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့ Foodies တို့ကိုသတင်းကောင်းပါးနိုင်ဖို့ ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။ ??? Wa Tote Kyee ဆိုင်ကတော့ ???? မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာ(၁)မျက်နှာချင်းဆိုင်က Iceberry အပေါ်ထပ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ?????? ????? ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ အသား ၊ ငါးတွေကို Foodies တို့စိတ်ကြိုက်ကင်ပြီးသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကင် ၊ အကြော် ၊ အချိုပွဲ ၊ အအေးစတဲ့အမျိုးအစားပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို အရသာရှိရှိနဲ့အဝသုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰⏰⏰ နေ့လည်(၁၁)နာရီကနေ ??? ည(၉)နာရီခွဲထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ (၃)ယောက်စားရင် (၁)ယောက် Free ရနိုင်တဲ့အတွက် (၄)ယောက်သွားစားမယ်ဆိုရင် (၃)ယောက်စာပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ မိသားစုတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စုပြီးသွားစားကြမယ်ဆိုရင် အရသာထူးခြားတဲ့ BBQ & Hot Pot ကိုစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? Foodies တို့ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ??? treat ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မှတ်ပုံတင်(သို့)ကျောင်းသားကဒ်ကိုပြပြီးသွားရောက်စားသုံးမယ်ဆိုရင် မွေးနေ့ရှင်ကို Free သုံးဆောင်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? မွေးနေ့ရှင်နဲ့အတူအနည်းဆုံး(၁)ယောက်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ပြီးတော့ Booking ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ☎️? ကဲဒီလောက်တောင် အမယ်လည်းစုံ ၊ အရသာလည်းကောင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှယ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကတအားရှားတယ်နော်။ ဒီတော့ Promotion တွေမကုန်ခင်အမြန်လေး သွားရောက်သုံးဆောင်ကြဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ???
Image Source : www.facebook.com/watotekyee